गर्मी मौसमका रोगहरू - स्वास्थ्य - प्रकाशितः जेष्ठ १८, २०७४ - नारी
गर्मी मौसमका रोगहरू
डा. श्रीजु वैद्य श्रेष्ठ, फिजिसियन काठमाडौं मेडिकल कलेज, ब्लुबर्ड इन्टरनेसनल हस्पिटल
गर्मी मौसमको आगमनसँगै विभिन्न किसिमका रोग लाग्छन् । गर्मीमा शरीरमा भित्री–बाहिरी विभिन्न किसिमका रोग लाग्नसक्छन् । डा. श्रीजु वैद्यका अनुसार बाहिरी रोगअन्तर्गत छालामा घमौरा, डण्डिफोर, एलर्जी, फंगल इन्फेक्सनजस्ता समस्या सिर्जना हुन्छन् भने टाइफाइड, जन्डिस, झाडापखाला, मलेरिया, आउँ, हैजा, डेंगुजस्ता रोगले समेत आक्रमण गर्छन् । यो मौसममा हिट स्ट्रोकको समस्या पनि बढी देखा पर्छ । यसका कारण कतिपयको मृत्युसमेत हुने गरेको छ । चर्को घामका कारण तापक्रम बढेर यस्तो हुन्छ ।
यो मौसममा गर्मी धेरै हुने भएकाले खानेकुरा राम्रोसँग पच्दैन । पानी पर्ने भएकाले वरपरको वातावरण फोहोर हुन्छ । यसले गर्दा पनि धेरै मानिस बिरामी हुने गरेका छन् । त्यसका अतिरिक्त गर्मी मौसममा पानी कम पिइने र शरीरमा भएको पानी पसिनाको माध्यम हुँदै बाहिर निस्कने भएकाले पानीको मात्रा कम भै डिहाइड्रेसन तथा थकान महसुस हुन्छ । यस्तो हुँदा कुनै रोग नभए पनि निद्रा मात्र लागिरहन्छ ।
–लगातार ज्वरो आइरहन्छ । औषधि खाए एकछिन कम हुन्छ र पछि फेरि ज्वरो आउँछ ।
–४–५ दिनसम्म यस्तो भैरहन्छ ।
–कसैलाई कब्जियत हुन्छ भने कसैलाई डायरिया हुन्छ ।
–बिरामीलाई खानामा रुचि हुँदैन ।
फोहोर खानेकुरा एवं दूषित पानी । यो रोग साल्मोनेला नामको कीटाणुका कारण लाग्छ ।
समयमै उपचार नभए आन्द्रामा प्वाल पर्छ । पछि गएर निमोनिया हुनुका साथै मिर्गौलामा समेत असर पर्छ । यो रोगबाट जोगिन ताजा खानेकुरा तथा उमालेर फिल्टर गरिएको पानी मात्र पिउनुपर्छ । समयमै उपचार गराउनुपर्छ ।
–जन्डिसलाई पहेंलो रोगसमेत भनिन्छ । यो रोग जुनसुकै उमेरका मानिसलाई लाग्नसक्छ ।
–जन्डिस हुँदा ज्वरो आउने, शरीर आलस्य हुने, कमजोरी हुने, खान मन नलाग्ने, पिसाब पहेंलो हुने आदि लक्षण देखा पर्छन् ।
–पछि गएर आँखा एवं अनुहार पनि पहेंलो हुन्छ ।
जन्डिस साधारणतया फोहोर तथा संक्रमित पानीबाट हुन्छ । यसैगरी बासी वा सडेगलेका एवं बाहिर खुल्लै राखिएका खानेकुराबाट पनि यो रोग लाग्नसक्छ ।
कतिपयले जन्डिस भएको अवस्थामा पहेंला खानेकुरा खानुहुँदैन भन्छन् जुन गलत हो । जन्डिस भएका बेला सामान्य खाना खान सकिन्छ । कार्बोहाइड्रेडयुक्त खानेकुरा आलु, भात, चिनीपानी, ग्लुकोज आदि खान मिल्छ । जन्डिस क्रिटिकल खालको हो भने प्रोटिनयुक्त खाना खानु हुँदैन । तारेका तथा भुटेका खानेकुरा परहेज गरी प्रशस्त आराम गर्नुपर्छ ।
–ज्वरो आउँछ । वाकवाकी लाग्नुका साथै पेट पनि दुख्छ ।
–उपत्यकामा पनि डेंगुका बिरामी देखा पर्न थालेका छन् । लामखुट्टेबाट सर्ने यो रोगमा चर्को ज्वरो आउँछ भने हाडजोर्नी पनि दुख्छ ।
–घर वरपरको वातावरण सफा राख्नुपर्छ ।
–झुल प्रयोग गर्नुपर्छ । घर वरपर भएका खाल्डाखुल्डी पुर्नुपर्छ ।
–गर्मीमा सबैभन्दा बढी झाडापखालाको प्रकोप हुन्छ ।
–दूषित पानी तथा बासी खानेकुराले गर्दा झाडापखाला लाग्छ ।
–पानी पर्ने भएकाले जताततै फोहोर पानी जम्छ । दूषित पानी पिउँदा झाडापखाला चल्छ । बाहिर खुल्लै राखिएका खानेकुरा खाँदा पनि झाडापखाला लाग्नसक्छ ।
–हात राम्रोसँग सफा गरेर मात्र खानेकुरा खानुपर्छ ।
–पानी उमालेर मात्र पिउनुपर्छ । झिंगा भन्किएका तथा खुल्ला राखिएका खानेकुरा खानुहुँदैन । बासी वा सडेगलेका खानेकुरा खानुहुँदैन । झाडापखाला लागे जीवनजल पिइरहनुपर्छ ।
–झाडापखाला लागेका बेला जुस तथा ग्लुकोज पिउनुहुँदैन ।
–दालको रस तथा सुप खाइरहनुपर्छ । यति गर्दा पनि समस्या कम नभए चिकित्सककहाँ गएर उपचार गराउनुपर्छ ।
यसबाहेक गर्मीमा अन्य थुप्रै समस्या देखा पर्छन् । पहिले–पहिले हैजाको प्रकोप बढी भए पनि अहिले त्यसमा कमी आएको छ । फोहोर तथा ढल मिसिएको पानीका कारण हैजा लाग्छ । त्यसैले दिसा–पिसाब गरेर आएपछि हात राम्रोसँग धोएर मात्र खानेकुरा खानुपर्छ । जारको होस् अन्य पानी उमालेर फिल्टर गरेपछि मात्र पिउनुपर्छ । यो मौसममा कालाज्वर, मलेरियाजस्ता रोग पनि लाग्न सक्छन् । लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने यो रोग तराईतिर बढी लाग्छ । यस्ता बिरामीलाई सामान्य तथा काम ज्वरो आउँछ । यो मौसममा महिला तथा बालबालिकालाई पिसाबको संक्रमण हुनसक्छ । बालबालिकाहरू बढी खेल्ने–कुद्ने काम गर्छन् । त्यसले गर्दा शरीरबाट पसिना आउँछ । पिसाब रोक्दा पनि पिसाबको संक्रमण हुन्छ । महिलाले पिसाब रोके पिसाबको संक्रमण हुने सम्भावना हुन्छ । महिलाको पिसाबनली सानो हुने भएकाले पिसाब रोक्दा कतिपयलाई यसको संक्रमण हुनसक्छ । फोहोर भित्री वस्त्र लगाउँदा पनि कीटाणु सजिलै भित्र छिर्ने भएकाले पिसाबको संक्रमण भएको पाइन्छ । त्यसैले सफा भित्री वस्त्र लगाउनुपर्छ । गर्मीमा रोगले छिट्टै आक्रमण गर्ने भएकाले विशेष सावधानी अपनाउनु जरुरी छ । यो मौसममा पसिना बढी निस्कने भएकाले शरीरमा नुनपानीको मात्रा कम हुन्छ । त्यसैले प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनुपर्छ । घाममा निस्कदा एलर्जी हुने भएकाले छाताका साथै सनस्किन प्रयोग गर्नुपर्छ । यसैगरी धूँवा–धूलोका कारण आँखामा समेत समस्या उत्पन्न हुनसक्छ । यतिबेला आँखा चिलाउने तथा रातो हुने समस्या बढी हुन्छ जसलाई कन्जेक्वावाइटिस भनिन्छ । त्यसैले बाहिर हिँडडुल गर्दा सनग्लास लगाउनुपर्छ भने घर आएपछि सफा पानीले अनुहार तथा आँखा धुनुपर्छ ।
–गर्मी मौसममा अमिलो, पिरो तथा फ्राई कुरा खान मन लाग्छ ।
–स्वादका दृष्टिले मीठा भए पनि यस्ता खानाले मानिसलाई दीर्घरोगी बनाउँछ ।
–सफा पानीले नपखालेका तथा नपाकेका सागसब्जी तथा माछामासु खाँदा अनेकौं समस्या उत्पन्न हुनसक्छन् ।
–फाइबरयुक्त खानेकुरा तथा राम्रोसँग पखालिएका फलफूल प्रशस्त मात्रामा खानुपर्छ । –सीधै फ्रिजबाट झिकेर खानेकुरा खाँदा टन्सिल हुन सक्छ ।
शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन नदिन
–गर्मीमा कम पानी पिउँदा जलवियोजन हुन सक्छ । त्यसैले दिनहुँ कम्तीमा तीन–चार लिटर पानी पिउनुपर्छ ।
–पानी पिउँदा छालासम्बन्धी रोगबाट पनि जोगिन सकिन्छ । एकैपटक धेरैभन्दा पनि पटक–पटक थोरै–थोरै पानी पिउनु उपयुक्त हो ।
–जलवियोजनले दिमाग शून्य हुनुका साथै अल्छी लाग्छ ।
–गर्मीमा दिनहुँ दही खाए शीतलता प्राप्त हुनुका साथै जलवियोजनबाट पनि जोगिन सकिन्छ ।
–काँक्रा, खरबुजा आदि रसिला फलफूल खानुपर्छ ।
घरवरपर सफा राखौं
–जलवायु परिवर्तनसँगै तापक्रम वृद्धि हुँदा, फोहोरमैलाको व्यस्थापन नहुँदा एवं घर वरपर फोहोर पानी जम्दा लामखुट्टेको वृद्धि हुनसक्छ । यसले गर्दा विभिन्न किसिमका रोग लाग्न सक्छन् ।
–घरभित्र–बाहिर सफा राख्नुपर्छ । गमलाको प्लेटमा पानी जमेको भए त्यसलाई सफा गरिरहनुपर्छ ।
–घरवरपर खाल्डाखुल्डी भए पुर्नुपर्छ ।
–सुत्ने बेलामा हातखुट्टामा तेल तथा क्रिम लगाउनुपर्छ ।
–लामा बाहुला भएका पहिरन लगाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
–फलफूल राम्रोसँग धोई–पखाली खानुपर्छ ।
–गर्मीमा खानेकुरा छिट्टै बिग्रने भएकाले फ्रिजमा राख्नुपर्छ ।
–जारको पानी उमालेर तथा पियूष हालेर पिउनुपर्छ ।
–दूध पनि राम्रोसँग उमालेर मात्र सेवन गर्नुपर्छ ।
–बाहिर हिँड्दा मास्क प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
–हात धोएर मात्र खानेकुरा खानुपर्छ ।
–सडकमा राखिएका, बासी, सडेगलेका तथा खुल्ला खानेकुरा खानुहुँदैन ।
–सरसफाइमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।
वैशाख २८, २०७५ - ठन्डा–ठन्डा कुल–कुल
स्वस्थ हाँसो र मुस्कानको महत्त्व असार २९, २०७५
रुनु लाभदायक असार २८, २०७५
तीसपछिको तयारी असार २१, २०७५
महिनावारीमा प्याडको विकल्पमा कप असार १३, २०७५
पीडाविरुद्ध लड्ने सूत्र असार ४, २०७५
स्वास्थ्यका लागि भिन्डी जेष्ठ २५, २०७५